Puntland oo lugu qancinayo qaabka lugu dhisayo maamulka gobollada dhexe ee dalka Somalia (Warbixin) |
Saturday, August 23rd, 2014 Puntland oo lugu qancinayo qaabka lugu dhisayo maamulka gobollada dhexe ee dalka Somalia (Warbixin)
ShareAddis Ababa Wacaal Media
Dalka Itoobiya booqasho an la caddeeyn waxaa ay salka ku heyso waxaa ku jooga madaxweynaha Puntland,Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaana la sheegay inuu la shiri doono madaxda dalkaas.
Cabdilweli Gaas mar uu shalay saxaafadda kula hadlay Garoowe waxuu sheegay,Itoobiya iyo Puntland inay dano badan isaga xiran-yihiin,madaxda dalkaasna uu kala hadlayo arrimo labada dhinac quseeya.
“Itoobiya iyo Puntland waxaa isaga xiran dano badan,waxaana la shiri doona madaxda dalkaas,”ayuu yiri Gaas oo inta raaciyey booqashadiisa inay qaadaneyso labo maalin.
Warar kale ayaa sheegaya madaxweynaha Puntland iyo mas’uuliyinta uu la shirayo inay isla soo qaadi doonan diidmada Puntland ee maamulka gobollada dhexe.
Puntland ayaa horay u sheegtay inaysan aqbali doonin dhismaha maamulka Mudug iyo Galgaduud maadaama inta badan gobolka Mudug ay maamusho Puntland.
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya oo dhawaan booqday Garoowe,waxuu u caddeeyey madaxda Puntland maamulka in lugu biirin doono koonfurta Mudug oo ay Galmudug maamusho.
“Nicholas Kay waxuu ka qeyb-galay heshiiskii maamulka lugu dhisay,haddana waxuu isku dayey inuu Puntland ku qanciyo maamulka,ilama ahaa inay wax badaleyso arrinta,”sidaa waxaa yiri aqoon yahay Axmed Muumin Warfaa oo ka faalooda siyaasada Soomaaliya.
Warfaa waxuu sheegay maamulkan inuu ku dhismo karo oo kaliya,arrimaha ay ku heshiiyan dhinacyada gobollada ku sugan.
Itoobiya ayaa arrintan ka qancin doonta Puntland,sida ay sheegayan warar huru-dhac ah,halka sidoo kale la sheegay inay dowladda Itoobiya isku dayi doonto isku soo dhawan-shiyo iyo wada-hadal dhex mara dowladda faderaalka iyo Puntland.
Madaxda Soomaaliya ayaa inta badan Itoobiya taga marka ay jiran arrimaha khilaafadka,dad baan oo Soomaali ahna waxaa ay aaminsan-yihiin Itoobiya inay ka mid tahay dalalka sida dhow faraha ugula jira siyaasada Soomaaliya.
Wacaal Media-Xafiiska Wararka Muqdisho. 2 Responses for “Puntland oo lugu qancinayo qaabka lugu dhisayo maamulka gobollada dhexe ee dalka Somalia (Warbixin)”
Abdi says:	August 24, 2014 at 12:48 am	Khayaanada reer galbeedka ayaa ah in mar walbaa caqligooda aan la fahmin waana halka laga yiraahdo Caqli Gaal iyo indho Quraanjo lama arko.
Hadaba anoo jecel in aan cidna ku xadgudbin aan fikradayda ka dhiibto arintaan Mudug ka taagan,anoo jecel inaan laba ukala saaro aan idiin soo hormariyo arinta koobaad.
1- Sidaad la socotaanba Somalia Dagalkii sokeeye ka dib waxaa jiray dagaal sababay geeri aad u foolxun waliba aysan hilmaami karayn kuwa iminka aduunka taladeeda haya ee Reer Galbeed,kaasoo ahaa in Maraykanka looga Dilay Xamar Askar gaaraysa 22 ,walibana Dariiqa lagu jiid-jiiday Bakhtigoodii ceeb iyo sumcad xumo ku beertay maraykanka isagoo Markaa siku haystay inuu yahay Libaaxa aduunka,kasa raacday lama iloobaan.
iyagoo dhacdadaas ka duulaya reer galbeed ayay wacad ku mareen in Muqdisho noqoto meel caan ka ah dunida wacadna ku maray inaysan waligeed aysan dagin tan rabbi waa meesheedee.
Waa labaatan sanadood waxay iminka ku socotaa Xamar wax wanag ahna lagama hayo waxaana ku naf waayay dad Malaayiin kor u dhaafay ,waxaa intaas kasii daran in Dadkii Xamar ku noolaa aysan wali ka gaashaaman amaba aysan wax iska waydiin waxa ka dhacaya Muqdisho ,taasoo Nin walboo u dhashay dagaanka Muqdisho uu kiish toshay uu ku gurto Maal Aduun ,halka reer Galbeedna doonayaan inay iyaguna kafantooda badiyaan.
2- Waxaa ummaddii Somaaliyed mustaqbalkoodii iyo Dawladnimadoodii lagu xidhay waa Muqdisho oo Hagaagta ,waxa tunka cagta kaga hayaana waa Reer galbeed oo wali xasuusan wiilashoodii dariiqyada xamar lagu jiidjiday.
Hadaba waxaa dhacday in Somali Badan oo ay uGu horeeyaan Puntland iyo Somaliland ay maamulo Samaysteen walowba labaaas maamul(Puntland & Somaliland) ay kala hadaf iyo Aragti duwan yihiin ayaa misna ay ooga nabad galeen dhibaatada Xamar ka jirta ee aan rajada badan laga qabin inay Muqdisho hagaagto.
Waxaan rabaa inaan usoo daadago Dulucdayda oo ku salaysan Mudug iyo Puntland ma lakala Goyn karaa? ,Dabcan haa waa lakala goyn karaa laakiin waxay la dhigantaa Qof lagu yiri waxaa lagaa bixinayaa kelyaha waana noolaanaysaa oo uma baahnid kalyahaaga,waliba kaaga sii darane kan kalyaha loo bixinayaa waa mayd mar hore dhinatay.
Hadaba aan macneeyo,Mudug waxaa ka jira maamul dhaxal gal ah oo dhisan 16 sano kaasoo ah halkii laga soo hindisay maamulka Puntland ee iminka kaba awood iyo sumcad wanaagsan Xukuumadda Muqdisho ee Taangiga ku qaxweysa,Ninka ama shaqsiga hindisay in Puntland laga gooyo Mudug waa nin aan Somali wanaag u wadin kaagaba sii Darane haddii maamul kale oo dhisnaa lagu daro ma xumee ma u malaynaysaa ama astaahishaa Mudug in la raaciyo meel aan maamul iyo kala danbeyn aysan ka jirin xalaal iyo Xaaranna iskaga mid tahay lagana sugayn in ay helaan maamul sax ah qolada degtaa Koonfurta Mudug ee lagawada cararay somalina aysan wanaag u hayn,hadaba Ninka doonaya Mudug inuu ku daro meel aan Maamul lahayn waxay ka dhigantaa Ninkii lagu yiri keen kalyahaaga haloo bixyee maydkaan.
Waxaan kaloo ku dari lahaa haddii ay Reer Puntland ay aqbalaan indho adaygaan iyo iswaalkaan dhul boobka ah waxaan filayaa markaasi inay tahay Aakhiru-zamaan.
Faiza Warsame says:	August 24, 2014 at 5:00 am	gaas wuxuu latashaday umada uu matalo haduu latashado itoobiya gurigii habartiis buu aadayaa mana matalo puntland hadii ay dicayadtahayna hadeed gaas go,aan buu meel dhigtee kadaaya aflagaadada
Dr Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo Maanta ku geeriyooday Muqdisho & Madaxda Dalka oo ka tacsiysiyeeyay
31 January,2015 at 20:30:55 / 1 comment Ganacsato Gawaari ku wareejiyay Madaxweynaha Puntland (Sawiro)